Khubaro Caafimad oo ka digtay in qaar ka mid ah habka wajidhaqu soo dedejiyo wayeelnimo. Cilmibaaris | Gaaloos.com
Home » galmada » Khubaro Caafimad oo ka digtay in qaar ka mid ah habka wajidhaqu soo dedejiyo wayeelnimo. Cilmibaaris
Khubaro Caafimad oo ka digtay in qaar ka mid ah habka wajidhaqu soo dedejiyo wayeelnimo. Cilmibaaris
Dad farabadan ayaa cadeysta in marka ay hurdada katoosaan ay wajiga ku dhaqadaan shawarka qabeyka ee suuliga, laakiin qaar ka mid ah khubarada caafimadka ayaa sheegaya in ay jiraan qalaad lacaadeystay oo arintaasi la xiriira, taasoo sameyn xun kuyeelada jirka banii,aadamka, waxa sameyntasi ka mid ah wajiga oo yeesho lalabyo farabadan oo qofka ay ka muqaneyso wayeelnimo.
Hadaba Su,aasha la isweydii karo ayaa ah sidee isticmaalka suuligu sabab ugu noqonkaraa duqnimo soo deg degta?
Drs Elisabeth Tanazi oo ah Agaasimaha Machad qaabilsan qaliinka maqaarka oo lahadleysay wargeyska Dagaloos ee ka faalooda arimaha caafimadka ayaa aamisan inuu jiro qalad xun oo ay dadka qaar cadeysteen kaasoo qeyb ka ah in maqaarku uu yeesho lalaabyo farabadan.
Qaladaadkas ay dadku caadeysteen ayaa waxaa ka mid in wajiga lagu dhaqdo Doshka ama shaawarka suuliga kaasoo tuuraya biyo ka awoodbadan maqaarka wajiga insaanka taasina ay kento in wajigu uu yesho calamado laalaab ah oo marka danbe soo baxa.
Qaldadka kale ee sababa wayeelnimada soo deg degta ayaa waxa ka mid ah habka loo isticmaalo qalajinta wajiga marka lasooqabeysto kadib oo dadbadani ay wajiga ku holaan dhar culus sida shukumaanada ama dharkale o oculus tasoo khubaradu ay shegeen in ay jirka ku reebto Bakteria farabadan.
Ugu danbeyntii khubaradan ayaa ku talinaya in laga fogaado isticmaal biyaha ay turayso shawarka suuliga oo taa bedelkeeda waji dhaqa loo isticmaalo tubada caadig ah, iyadoo xisabta lagu darayo kuleylka ama qabowga biya wajiga lagu dhaqo waxaana ugu wanasan biyah qabow xigeenka ah in loo adegsado waji dhaqa marka wajiga biyaha laga qalajinayana la isticmaalo waxyaabo jilicsan oo khafif ah .
Title: Khubaro Caafimad oo ka digtay in qaar ka mid ah habka wajidhaqu soo dedejiyo wayeelnimo. Cilmibaaris